Ibsa ABO: Baatii Eblaa Baatii Gootota Oromoo! |
Hawaasni addunyaa kamiyyuu, gootota isaa gabrummaa osoo irraa faccisanii kufan, bilisummaa ummata isaaniif lubbuu isaanii dabarsan, haqaa fi dimokraasii ummata isaanii kabajsiisuuf jecha farreen dimokraasiin wal qabanii lubbuu isaanii wareegan guyyaa itti yaadatu guyyaa wareegamtootaa qaba. Ummatni Oromoos akkuma ummata addunyaa kamiiyyuu guyyaa Gootota isaa itti yaadatuu fi faarsu kabajuu erga eegalee waggootni muraasi dabranii jiran.
Guyyaan Goototaa, guyyaa Gootota lubbuu isaanii bakka bu’aa hin qabnee fi kennaa hundaan olii mararfatnaan alatti ummataaf kennan itti yaadatan waan taheef ummata biratti kabajaa ol aanaan yaadatama. Ummatni Oromoo guyyaa goototaa Ebla 15 wagga waggaan kabajuu fi yaadatuu erga jalqabee waggoota dheeraa kan hin lakkoobsifne tahullee, har’a biyya keessaa fi alatti bakka Oromoon jiru hundatti sirna bareedaan kabajama. Ebli 15 guyyaa Gootota Oromoo tahee akka yaadatamu ABOn wayta murteessetti, miseensota dhaabaa wareegaman ittiin yaadatuu herreguun qofa hin turre.
Ilmaan Oromoo kanneen ummata Oromoo gabroomfatuuf itti duulan osoo ittisanii kufan,
Roorroo fi hacuuccaan itti hammaatuu fi jabaatuu irraa sirna bittaa alagaa matayyaanis tahe gareen osoo lolanii kanneen lubbuu isaanii kennan,
Kanneen gabrummaan booda, bakkoota adda addaatti ummata Oromoo irraa waanjoo gabrummaa kaasuun akka sabaatti mirgi qabu kabajameefii jiraatuu qabaatti amanuun sirna gabroonfataa irratti osoo qabsa’anii wareegaman akka ittiin yaadatamaniif yaaduu irraa Ebli 15 guyyaa goototaa tahee akka yaadatamu murteesse. Kana irraahis, guyyaan Goototaa, Oromiyaa keessaa bakkoota murtaa’oo fi ummata Oromoo keessaa namoota hagoon kabajamaa fi yaadatamaa ture, har’a kan ummata Oromoo maraa tahee bakkayyuutti yaadatamaa fi kabajamaa jira.
Gootota ofiif kabaja barbaachisu gochuu fi yaadatuun tarkaanfii sirrii fi kabajamaa lammii hundi irraa hirmaatuu qabuu dha. Guyyaa kana wayta yaadannuttis akeeka kufaniif sana galmaan gahuuf nutis gama keenyaan qooda lammummaa nurraa eegamu gumaachuuf of irratti murteessuun tahuu qaba.
Ummatni Oromoo walabummaa isaatiif jecha wareegamni baase guddoo ulfaataa tahuun hin falamsiisu. Ummatni Oromoo gabrummaa jalatti miidhaan dorgomaa hin qabne irra gahuu fi wareegamni itti heddummaatuu irraas diinaan waldhaansoo qabuu hin dhaabne. Har’as akkuma wayta dabree wareegama ulfaataa baasuu irratti argama.
Guyyaa Gootota Wareegamtootaa bara 2017, bakka jirru maratti wayta yaadatnu qaphxiilee itti aanan yaadatuu fi wal yaadachiisuun egeree qabsoo bilisummaa fi ummata keenyaaf bakka ol aanaa qabaata.
Ebli 15, guyyaa Gootota Oromoo gabrummaa didatuun osoo dura dhaabbatanii kufan, gootummaa isaaniin boonaa fi faarsaa dhaamsa dhaammatan waliin yaadatuu qabna. Gootota keenya wareegaman wayta yaadannu, kanneen har’a lubbuun jirru onnatnee faajjii isaanii ol kaasuun kaayyoo kufaniif bakkaan gahuuf waadaa keenya haaromsuu fi dachaan guddisuuf waadaa seenuun kabajaa fi jaalala qabnuuf hojiin fasaruuf murannoon ka’uu keenya agarsiisuun tahuu qaba.
Hundaan olitti ammoo Guyyaa kana Ebla 15, oggaa yaadatnu, kaayyoo bilisummaa ummatni Oromoo irratti cichee har’aan gahe xumuraan gahuuf qabsoo bilisummaa itti fufuuf waadaa keenya haaromsuun tahuu qaba.
Kanatti dabalee Guyyaa kana, kaayyoo Gootowwan keenyaa, Oromummaa irratti hundaa’ee fi tokkummaa saba Oromoo tiksuu fi cimsu, milkeessuu irratti hojjatuuf waadaa seenuudhaan kabajaa Gootota keenyaaf qabnuuf agarsiisuu qabna.
Har’a Qeerroon Bilisummaa Oromoo fi murni hawaasaa garagaraa miidhaa daangaan alaa humnaan irratti fe’amee jiru jalaa of bilisoomsuuf harka qullaa diina dura dhaabbatuun wareegama ulfaataa baasaa akka jiran hubatamaa dha. Wareegama baasame kanaanis sirni abbaa irree Wayyaanee hundee dhaa raafamee labsii hatattamaa labsuun bulchiinsa impaayerattii hunda waraana jala galchuun ifatti beekama. Mootummaa Wayyaanee irratti Fincilli Xumura Gabrummaa finiinfame ummata Oromoo irra dabree ummatoota ollaa onnachiisee mirga isaanii falmatuuf akka ka’an taasisuunis naannoo kanaaf fakkeenya tahuu isaa mirkaneessa.
WBOn, Qeerroon Bilisummaa, walii gala ummatni Oromoo walabummaa Oromiyaaf jecha waggaa dabre keessa qofa lubbuu kumootaan lakkaa’amu baasan. Kuma kudhanootaan mooraa waraanaa fi manneen hidhaa mootummaa shorarkeessaa gara garaa keessatti ukkaamsaa jalatti irratti roorrifame. Gochaan gara jabinaa fi faashistummaa kunis itti fufe malee hin dhaabbatne.
Wareegamni baafamaa turee fi jiru, Oromoo bakka hundaa waliif dirmachiisee akeeka tokkoof akka hiriiru taasisuu irratti shoorri taphate dinqisiifamaa dha. Dhumaatii abbootii, haawwanii fi obboleeyyan irra gahaa ture ilaalchisee tarkaanfiin lammiilee Oromoo biyyoota gara garaa keessa jiraniin fudhatames kan dinqisiifamuu dha. ABOn kanneen sagalee ummata Oromoo tahan kanneeniif kabajaa qaba. Miidhaa Oromoo irra gahaa jiruu fi iyyata ummata Oromoo addunyaa beeksisuuf tarkaanfiin fudhatame kun fuula duras akka itti fufu yaaddachiisa. Sochii biyya keessaa ummatni keenya, Qeerroon Bilisummaa fi WBOn itti jiran karaa mijate hundaan cinaa dhaabbatuunis kan darbe caalaatti fardii tahuu ABOn jabeessee hubachiisuu fedha.
Har’a ummatni Oromoo miidhaan alagaa qabsoon alatti kan hin dhaabbatne tahuu beekuu dhaan bakka hundatti diina hudhee qabaa jira. Kun kan firii horatuu danda’u Oromoon qabsoo isaa keessaa fi alatti finiinsuutti dabalee akka nam-tokkootti yoo ka’ee fi waliin hiriire qofa.
Kana hubatuun, roorroo diinaa jalaa baanee akka sabaatti bilisummaan jiraatuuf, wal irratti duuluu dhaabuu dhaan qabsoo keessatti gumaacha keenya guddisuun murtii keenya isa duraa tahuu qaba.
Tarkaanfiin gara jabinaa mootummaa farra dimokraasii fi bilisummaa, jabaatuu fi heddummaatuun injifannoo irraa nuhi hin hanqisu. Deggersi ummata keenyaa fi hawwiin bilisummaaf qabu meeshaa waraanaa fi baay’ina waraanaaf kan hin jilbeenfanne tahuu fincilli itti turamee fi jiru kan mirkaneesse raga jiraataa dha.
Wayta ammaa kana mootummaan farra ummata Oromoo jaleewwan isaa ummata Oromootti bobbaasuun qabsoo isaa irraa daguuf afaan tolanii akka itti dhihaatanii fi midiyaalee irratti kan raawwachuu hin dandeenye kan raawwatuu danda’an fakkaatanii akka dubbatan hayyamuufiin ummata Oromoo sossobatuuf yaalaa jira. Gam-tokkoon sossobataa gama kaaniin ammoo ummatoota ollaa irratti duulsisuun lafa Oromoo qabsiisaa jira.
Tarkaanfileen fakkeessii fi diinummaa fudhatamaa jiran hundi, Wayyaaneen rakkoo siyaasaa impaayera Itophiyaa furuu kan hin barbaadne tahuuf ragaa dha. Kana ammoo qabsoon irra aanuuf Gootummaan qabsaa’uun murteessaa taha.
Wareegama Goototaatu bilisummaa dhalcha. Walabummaan Oromiyaa Goota lubbuu hin mararfanne mirga ummata isaanii kabajsiisuuf jecha dabarsanii kennaniin qofa mirkanaawa. Qabeenyi Oromiyaa alagaan dhuunfatee irratti abbaa of taasise ummatni Oromoo irratti ajajuu fi dantaa ofii irra oolfatuuf wareegama Goototaa gaafata.
Mootummaa humnaan aangootti dhufee fi humnatti amanu kan ummata irraa qaarisu humna qofa. Humnaan of irraa kaasuufis kan ammaa caalaatti ijaaramuudhaan humna tahanii argamuun murteessaa dha. Hanga humna tahanii hin mul’atnetti haqni dhageettii hin argatu. Kana malees kadhaa fi diina sossobatuun bilisummaan argamu hin jiru. Waan taheef akkuma hangafoota keenyaa roorroo alagaa nurraa ittisuuf, ummata Oromoo bilisummaa gonfachiisuuf jecha lubbuu isaanii dabarsanii kennan, nutis fakkii tahuun qabsoo fi diddaa itti jirru jabeeffatnee gumaa wareegamtoota keenyaa bilisummaan baasuuf gootummaan haa kaanu.
Wareegamtoota Keenya bara baraan yaadatna!